DEG-DEG: Zinedine Zidane Oo Sabab Aan La Rumaysan Karin Ku Cadeeyay In Gareth Bale Uu Ku Maqan Yahay. - Gool24.Net
DEG-DEG: Zinedine Zidane Oo Sabab Aan La Rumaysan Karin Ku Cadeeyay In Gareth Bale Uu Ku Maqan Yahay.
Tababaraha kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa si rasmi ah u shaaciyay sababta dhabta ah ee uu Gareth Bale uga saraay liiska ciyaartoyda kooxdiisa Madrid ee kulanka Manchester City ee Champions League.
Zinedine Zidane ayaa hore u shaaciyay liiska ciyaartoyda kooxdiisa Real Madrid ee uu habeen danbe kala hor iman doono kooxda Guardiola ee Manchester City waxaana markaas loo haystay in sababta uu Bale ku maqnaa tahay go’aan uu Zidane gaadhay balse xaalada ayaa si lama filaan ah isku badashay.
Zinedine Zidane ayaa hadda si rasmi ah u shaaciyay in Gareth Bale uu iska diiday in uu kooxdiisa Real Madrid u ciyaaro kulanka Manchester City ee Champions League.
Intii lagu jiray dhamaadkii xili ciyaareedka La Liga waxa uu Gareth Bale ahaa mid kursiga kaydka Real Madrid ku caajisay kadib markii uu Zinedine Zidane iska indho tiray xidiga reer Wales tan iyo kulankii Real Mallorca.
Laakiin Gareth Bale ayaa qaatay go’aan lama filaan ah kadib markii uu Zinedine Zidane u sheegay in aanu diyaar u ahayn in uu kooxdiisa u ciyaaro kulanka Manchester City ee Champions league.
Zinedine Zidane ayaa ku dooday in uu ixtiraamayo go’aanka uu Gareth Bale ku gaadhay in aanu kooxdiisa u ciyaarin kulanka Manchester City laakiin waxaaba loo arkayaa in Bale uu haddaba soo ciyaaray kulankiisii ugu danbeeyay ee Madrid oo uu diyaar u yahay in uu Bernabeu ka dhaqaaqo.
Tababare Zinedine Zidane oo xaqiijinaya go’aanka lama filaanka ah ee uu Gareth Bale ka qaatay in uu Madrid u ciyaaro kulanka Man City ayaa yidhi: “Isagu waa ciyaartoy Real Madrid ah, waxaan ixitraamayaa in uu isagu door biday in aanu ciyaarin, taasi waa waxa kaliya ee aan idiin sheegi karo”.
Haddii uu Zinedine Zidane lixdii kulan ee ugu danbeeyay ee xidhiidhka ahaa uu shaxda kooxdiisa ka soo reebay Gareth Bale, markan Bale ayaa go’aan ku gaadhay in aanu gabi ahaanba qayb ka noqon kooxda Los Blancos ee hadda ku sugan magaalada Manchester ee City la ciyaari doonta habeen danbe.
Zinedine Zidane iyo Gareth Bale ayaa muddo dheer xidhiidhkoodu burbursanaa wuxuuna ka mid ahaa sababihii uu Zidane isku casilay sanadkii 2018 kii laakiin hadda Bale ayaa noqday mid soo xidhay waayihiisii ciyaareed ee aan markii horeba lugaha ku taagnayn ee Real Madrid.
Ilaa hadda lama oga nooca talaabada sharci ee ay maamulka Real Madrid ka qaadi doonan Gareth Bale in uu Zinedine Zidane ka dalbaday in aanu ku soo darin liiska kooxdiisa ee kulankan Man City laakiin waxaa loo arkaa in uu yahay dhamaadkii waayihiisa ciyaareed ee Madrid.
Gareth Bale ayaa waqti adag ku soo qaatay Real Madrid sanadihii ugu danbeeyay wuxuuna cadaadis badan kala kulmayay in uu kursiga kaydka u fadhiyay inta ugu badan waqtigii labaad ee uu Zinedine Zidane ku soo laabtay Madrid.